TOP King & Queen - About
ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု ထုတ်လုပ်/ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချတော့မယ်ဆိုရင် စားသုံးသူရဲ့ လက်ခံမှု၊ ယုံကြည်မှုကို ရယူပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ? ဘာတွေလိုအပ်သလဲ? ဘယ်လိုစီမံကိန်းရေဆွဲမလဲ? Top King & Queen နဲ့ ၁ နာရီခန့် အချိန်ပေးပြီး လူကြီးမင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြည့်လိုက်ပါ။
ဘယ်သူတွေက ဘယ်တွေနှစ်သက်သလဲ? ဘာကြောင့်နှစ်သက်ရတာလဲ? ကိုယ့်ပစ္စည်းက ဘာလို့ ရောင်းမထွက်တာလဲ? သိချင်နေရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ What ပေါင်းများစွာ How ပေါင်းများစွာကို ဘယ်လိုစုစည်းမလဲ? Top King & Queen မှ စနစ်ကျစွာနဲ့ Research ပြုလုပ်ပေးပါရစေ။
Bill Board တစ်ခုကို ဘယ်လိုထောင်သင့်သလဲ? ဘယ်လိုနေရာမျိူးကိုရွေးချယ်ရမလဲ? ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုအတွက် စဉ်းစားရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် Top King & Queen ကိုသတိရလိုက်ပါ။
Out Door - In Door P.O.S
Out Door - In Door P.O.S တွေကို သင့်ရဲ့ Budget နဲ့ လိုက်လျောညီထွေမဲ့ ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျနဲ့ Top King & Queen က ပြုလုပ်ပေးပါရစေ။ Vinyl, PP Board, Silk Screen Printing Services, Out Door - In Door Sticker, Linght Box (Out Door - In Door), X - Stand, Road Sign, Outlet Singage etc ....
ကြော်ငြာနည်းပေါင်းစုံထဲကမှ လျှပ်တပြတ်အကျိုးရရှိစေမဲ့ ကြော်ငြာနည်းတစ်ခုပါ။ စားသုံးသူကို လျှပ်တပြတ်ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး နေရာအနှံ့ ရွေ့လျှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့် အကျိုးများစွာဖြစ်ထွန်းမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Copyright © 2019 HANGUL Co.Ltd